Marketing iraisana: Ahoana ny fomba nampifanarahan'ny taranaka tsirairay sy ny teknolojia | Martech Zone
Tena mahazatra ahy ny misento rehefa mahita lahatsoratra manaratsy ny Arivo Taona na manao tsikera stereotypika mahatsiravina hafa. Na izany aza, tsy dia misy fisalasalana fa tsy misy fironana voajanahary amin'ny fitondran-tena eo amin'ny taranaka sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny teknolojia.
Heveriko fa azo antoka ny milaza fa, amin'ny salan'isa, ireo taranaka taloha dia tsy misalasala mandray ny telefaona ary miantso olona iray, raha ny tanora kosa dia hitsambikina amin'ny hafatra an-tsoratra. Raha ny marina dia manana mpanjifa naorina aza izahay fandefasana hafatra an-tsoratra sehatra hifandraisana amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'ireo mpifaninana… miova ny fotoana!
Ny taranaka tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy, ny iray amin'izany dia ny fampiasan'izy ireo ny haitao. Miaraka amin'ny haitao haingam-pandeha haingana amin'ny haingam-pandeha, ny elanelana misy eo amin'ny taranaka tsirairay avy koa dia misy akony ny fomba fampiasan'ny sokajin-taona tsirairay ny sehatra teknolojia maro hanamorana ny fiainany - na eo amin'ny fiainana izany na any am-piasana.
Inona avy ireo taranaka (Boomers, X, Y, ary Z)?
BrainBoxol no namorona ity infographic ity, Ny evolisiona teknolojia sy ny fomba ahatongavantsika rehetra, izay manome antsipiriany ny tsirairay amin'ny taranaka sy ny fihetsika sasany izay iraisan'izy ireo momba ny fananganana teknolojia.
Boomers zaza (Teraka tamin'ny 1946 sy 1964) - Ny boomers zazakely dia mpisava lalana amin'ny fananganana solosaina an-trano - saingy amin'izao fotoana izao amin'ny fiainany dia somary somary bebe kokoa izy ireo tsy sahy mandray teknolojia vaovao.
Generation X (Teraka tamin'ny 1965 ka hatramin'ny 1976) - mampiasa mailaka sy telefaona hifandraisana indrindra. Gen Xers dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny Internet ary ny fampiasana ny finday avo lenta amin'ny fidirana amin'ny apps, media sosialy, ary amin'ny Internet.
Arivo Taona na Taranaka Y (Teraka tamin'ny 1977 ka hatramin'ny 1996) - ampiasao indrindra ny fandefasan-kafatra an-tsoratra sy ny media sosialy. Ny millennial no taranaka voalohany nihalehibe tamin'ny media sosialy sy ny finday finday avo lenta ary mbola manohy ny fahatongavan'ny taranaka mampiasa ny haitao.
Generation Z, iGen, na Centennial (Teraka tamin'ny 1996 ary taty aoriana) - ampiasao voalohany indrindra ireo fitaovana fifandraisana sy fitaovam-pifandraisana am-pifandraisana mba hifandraisana. Raha ny marina dia eo amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra izy ireo 57% amin'ny fotoana ampiasany ny finday avo lenta.
Noho ny fahasamihafana misy eo aminy dia matetika ireo mpivarotra no mampiasa taranaka handefasana haino aman-jery tsara kokoa sy fantsona rehefa miresaka amina sehatra manokana izy ireo.
Inona ny atao hoe Marketing Generational?
Ny varotra Generational dia fomba marketing izay mampiasa fizarana mifototra amin'ny vondron'olona teraka ao anatin'ny vanim-potoana mitovy amin'izany izay mizara vanim-potoana sy vanim-piainana mitovy amin'izany ary izay novolavolaina tamin'ny fe-potoana manokana (fisehoan-javatra, fironana ary fivoarana).
Ny infographic feno dia manome fitondran-tena amin'ny antsipiriany, anisan'izany ny sasany tena manahirana izay miteraka ady eo amin'ny sokajin-taona. Zahao hahitanao azy…
Tags: baby boomerbaby boomersboomersfahazatoandiana miaramilagen ytaranakataranaka xtaranaka yvarotra mandovagenerationxgenxgenyindraysegmentationteknolojiafampiasana teknolojia isaky ny taranakay
Trano famakiam-boky: Inona izany? Ary Maninona no tsy mahomby ny paikadim-barotra amin'ny atiny raha tsy misy izany
17 Mey 2021 tamin'ny 10:25 hariva
Milaza ny Gen Z fa "200% toa miresaka amin'ny finday mandritra ny resadresaka asa" - "200% araka ny azo inoana" dia mila fampitahana, ary ny "200% azo inoana" dia midika hoe "indroa azo inoana" - koa avo roa heny IZA no miresaka amin'ny finday mandritra ny tafa sy dinika momba ny asa? ary ity ve dia amin'ny maha-mpitafa sa ny olona dinihina? Ary ahoana no mampety an'io amin'ny fahatsapana 6% fotsiny hoe tsy dia tsara ny miresaka, mandefa lahatsoratra na misedra rehefa miasa? Miasa ny resadresaka asa… .. raha 6% fotsiny no mahatsapa fa tsy maninona, amin'ny fomba ahoana no mety tsy ahitan'izy ireo indroa ny resaka amin'ny telefaona mandritra ny tafa sy dinika momba ny asa? Tsy misy dikany AZY izany, matematika fotsiny !!! ?????
18 Mey 2021 tamin'ny 5:48 hariva
Fanamarihana mafy izany. Mieritreritra aho fa ho azo antoka kokoa izy ireo nilaza… "azo inoana kokoa".